» “विकास निर्माणको कार्यमा राजनीति गरिनु हुँदैन”विकास सबैका लागि हो! खानेपानी मन्त्री बिना मगर “विकास निर्माणको कार्यमा राजनीति गरिनु हुँदैन”विकास सबैका लागि हो! खानेपानी मन्त्री बिना मगर – हाम्रो खबर
“विकास निर्माणको कार्यमा राजनीति गरिनु हुँदैन”विकास सबैका लागि हो! खानेपानी मन्त्री बिना मगर
कञ्चनपुर, ११ मंसिर । खानेपानीमन्त्री बीना मगरले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध समाज एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधबार पुनर्वास नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले हिंसारहित समाज निर्माणका लागि समाजका हरेक तप्काले एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
समतामूलक समाज निर्माण भएपछि मात्रै विकास र समृद्धि आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । समुन्नत समाज निर्माणका लागि सबैखाले हिंसाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धताअनुरूपका कार्य अगाडि बढाइएको चर्चा गर्दै उहाँले अधुरा विकास निमार्णका योजना सम्पन्न गर्नका लागि सक्दो पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
“विकास निर्माणको कार्यमा राजनीति गरिनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विकास सबैका लागि हो । सबैले हातेमालो गरी अगाडि बढाउनुपर्छ ।” सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको कुरामा जोड दिँदै उहाँले यसका लागि खानेपानीका केही आयोजना पूरा भएको र केही आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो